ခွပ်ဒေါင်းနီ: January 2009
တနေ့သောအခါ လူငယ်လေး သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ဟာ သဲကန္တာရ တခုကို ဖြတ်ပြီး
လှမ်း လျှောက် ခရီး ထွက်လာကြ တယ်။ ခရီး တနေရာ အရောက် မှာ သူတို့နှစ်ယောက်
ဟာ စကားများ ပြီး ရန်ထဖြစ် ကြတော့ တယ်။ အဲဒီလို ဖြစ် ကြ တဲ့အခါမှာ
သူငယ်ချင်း တယောက်က နောက်တယောက်ရဲ့ ပါး ကို ထ ထိုး လိုက် တယ်။ အထိုးခံ
ရတဲ့ လူငယ်လေးဟာ တော်တော်လေး နာသွား ပြီး စကားဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ သူဟာ
သဲပြင်ပေါ်မှာ ဒီ လို ရေး ချ လိုက် တယ်။ " ယနေ့ ငါ့အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း
အဲလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သဲကန္တာရ မှာ ရှိ တဲ့ စိမ်း လန်း စိုပြေပြီး
မြေသြဇာ ကောင်း တဲ့ နေ ရာ ကို ရောက်တဲ့အထိလှမ်း ဆက် လျှောက် လာ ကျ ပြီး၊
အဲဒီမှာ ခြေ လက် သန့် စင် တ ထောက် နားဘို့ ဆုံးဖြတ် လိုက် ကြတယ်။ အဲဒီ
မှာ အထိုး ခံရ တဲ့ လူငယ် လေး ဟာ အခန့် မ သင့် ဘဲ နွံ နှစ်ပြီး နွံထဲ က
ရုန်း မထွက်နိုင်ဘဲ သေလုမြောပါး ဖြစ် နေခဲ့ တယ်။ ထိုး လိုက်တဲ့
သူငယ်ချင်းက သေမယ့် ဘေး က ကယ်လိုက်ပြန်တယ်။ သေဘေး ကလွှတ်လာပြီး ပုံမှန်
အနေ အထား ကိုရောက်လာတဲ့ အခါ မှာ၊ သူဟာ ကျောက်တုံး ကြီး တစ်ခု ပေါ်မှာ
နောက်တ ဖန် ရေး လိုက် ပြန်တယ်။ " ယနေ့ ငါ့ အခင်ဆုံး သူ ငယ် ချင်း ငါ့
အသက် ကို ကယ်ခဲ့၏။ "
အဲဒီလက် သီး နဲ့ ထိုး လဲ ထိုး၊ ကယ်လဲကယ် ခဲ့ တဲ့ သူငယ်ချင်း က မေး
လိုက်တယ်။" ငါ မင်း ကို နာကျင်အောင် လုတ်တဲ့ အခါတုန်း က မင်း ဟာ
သဲပြင်ပေါ်မှာ ရေး ခဲ့တယ်။ အခု လဲ မင်း ရေး ကျောက် တုန်း ပေါ်မှာ ရေး
ပြန်ပြီး။ ဒါ တွေဟာ ဘာ ကြောင့်လဲ။"
သူ့ သူငယ်ချင်း က သူ့ကို ဒီလို ပြန် ဖြေ ခဲ့တယ်။ " သူငယ်ချင်း ရေ...
တစုံတယောက် က မင်း ကို နာကျင် အောင် ပြုလုပ်တဲ့ အခါမှာ၊ မင်း ရဲ့
တုန့်ပြန် မှုတွေက ခွင့်လွှတ်ခြင်း တွေ ပါတဲ့ လေ ရဲ့ပယ်ဖျက်ခြင်း
ကိုခံရမယ့် သဲပြင် ပေါ်မှာ ရေး ထား တဲ့ စာ သား တွေ လို မင်း လဲ ဘဲ သူတို့
မကောင်း တာ တွေ ကို လေ တွေ လို အ လွယ် တ ကူ ပြယ် ဖျက် သင့်တယ်။ ဒါပေ မယ့်
တစုံတယောက် က မင်း ကို ကောင်း တာ တွေ လုပ် ပေး တဲ့ အခါမှာ တော့ လေ တွေ အ
လွယ် တကူ မ ဖျက်နိုင်တဲ့ ကျောက်တုံး ပေါ်မှာ မင်း မှတ်တမ်း တင် ရေး သား
(အဲဒီလို ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နာကျင်မှု့တွေ နဲ့ နာ ကျည်း မှု့တွေ ကို သဲ
ပေါ်မှာ ရေး ထား တဲ့ စာ တွေ လို ဘဲ ရေး တတ်အောင် ကြိုး စား သင့်သလို
ကျွန်တော်တို့ အတွက်ကောင်း ကျိုး ဖြစ် စေမယ့် အ ရာတွေကို တော့ ကျောက်တုံး
တွေပေါ်မှာ မှတ်တမ်း တင် ကြရအောင် လား ဗျာ။ )
ဒီအကြောင်း လေး ကို တော့ တော်တော်များ များ သိကြ ဖတ်ဖူးကြ မယ်လို့ထင် ပါ
တယ်။ အနှစ်သာရ အရမ်း ရှိတဲ့အကြောင်း ပါ။ ဒါကြောင့်ဘာသာပြန်ပြီး ဝေမျှ
ခြင်း သက်သက် တာဖြစ် ပါတယ်။
Posted by khukdaungnee.blogspot.com at 5:31 PM0comments
ကျနော်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသော ချစ်သူမိတ်ဆွေလေးက မြန်မာပြည်ထဲကနေပို့ပေးလိုက်တာပါ၊ နှစ်သက်လွန်းလို့ ဘလော့ဒ်ပေါ်တင်လိုက်
တီဗွီအသံလွှင့် ဌာနတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခါက
တီဗွီအစီအစဉ် တစ်ခုအတွက် နီပေါလ် နိုင်ငံကို ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်။
တီဗွီရိုက်မယ့် နေရာက အမြင့်ပေ ၁၅၀၀ကျော်ရှိတဲ့ တောင်ထိပ်က
ရွာလေးတရွာမှာပါ။ အဲဒီရွာမှာ ရေမီး မရှိတဲ့အပြင် ကားတက်ဖို့
လမ်းတောင်မရှိပါဘူး။ ရွာခံလူ (၁၅) ယောက်လောက် ခေါ်ပြီး လိုအပ်တဲ့
ကွေ့ကောက် မတ်စောက်တဲ့ တောင်တက်လှမ်းတစ်လျောက် တီဗွီရိုက်ခဲ့ကြရတယ်။
လူတိုင်းက မောပမ်း နွမ်းနယ်နေပါပြီ။ လမ်းခုလပ်မှာ စမ်းချောင်းတစ်ခု
တွေ့တော့ ကြည်လင်အေးမြပြီး တစ်သွင်သွင်စီးနေတဲ့ ရေကိုကြည့်ပြီး လူတိုင်းက
"ဒီရေထဲ ဘီယာဇိမ်သောက်ရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ"လို့ အငမ်းမရ ပြောကြတယ်။
ဒီလောက်ခေါင်တဲ့တောထဲ ဘီယာဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ..? တောင်ခြေက +++ မှာ
တောင်ပေါ်ကို စမတက်ခင် အားလုံးက ဈေးကြီးတဲ့ ၀ီစကီပဲသယ်ပြီး ဘီယာတွေကို
ထားခဲ့ကြမယ် တိုင်ပင်လို့ လူတွေက ၀ီစကီပဲသယ်ခဲ့ကြတယ်။
စကားပြန်ရဲ့ အကူအညီကြောင့် ရွာထဲက ချီတော်လိလို့ အမည်ရတဲ့ လူငယ်တဦးက +++
မှာ သူ ဘီယာသွားဝယ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ သူ့စကားကြားတော့
လူတွေကပျော်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းခရီးကဝေးတော့ ၀ယ်ခိုင်းဖို့အတွက်
ဆုံးဖြတ်ရခက်နေကြတယ်။ လူငယ်က "ကိစ္စမရှိဘူး။ ကျွန်တော်လမ်းလျောက်တာ
မြန်တယ်။ မိုးမချုပ်ခင် ကျွန်တော် အရောက်ပြန်လာနိုင်တယ်"လို့
ချီတော်လိဟာ ပိုက်ဆံအချို့နဲ့ အိတ်တစ်အိတ်ယူပြီး တောင်အောက်ကို
ဆင်းသွားတယ်။ တကယ်ပဲ မိုးမချုပ်ခင်မှာ ဘီယာငါးပုလင်းနဲ့ တောင်ပေါ်အရောက်
ပြန်တက်နိုင်ခဲ့တယ်။ လူတွေက သူ့ကို လက်ခုပ်တီးပြီး ကြိုခဲ့ကြတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာ ချီတော်လိက "ခင်ဗျားတို့ ဘီယာသောက်ချင်ကြသေးလား"
လို့မေးပြန်တယ်။ မနေ့ညက မောမောနဲ့သောက်ထားတဲ့ ဘီယာအရသာကို လူတွေက
မမေ့ကြသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို နောက်တစ်ခေါက်သွားဝယ်ဖို့
ချီတော်လိက " ဒီနေ့ဟာ စနေနေ့.. မနက်ဖြန် တနင်္ဂနွေနေ့ ကျွန်တော်
ကျောင်းတက်စရာမလိုဘူး။ တဒါဇင်လောက် ကျွန်တော် သွားဝယ်ပေးလို့ရတယ်"
တဒါဇင်ဆိုတဲ့ မက်လုံးနဲ့ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်ခိုင်းလိုက်ပြန်တယ်။
ပိုက်ဆံနဲ့အိတ်ကိုယူပြီး ချီတော်လိဟာ တောင်အောက်ကို ဆင်းသွားပြန်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီညမှာ သူပြန်မလာခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ.....
ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်... လူတွေက တညလုံး သူ့ကို စိတ်ပူခဲ့ကြတယ်။
နောက်နေ့မနက် ရွာကလူတွေဆီမှာ သူ့အကြောင်းကို စုံစမ်းကြည့်တော့
ရွာခံလူတွေက "ခင်ဗျားတို့ သိပ်အတာပဲ။ ဒီလောက်များတဲ့ ငွေကို ရမှတော့
အဲဒီကလေး ဘယ်ပြန်လာတော့မလဲ" လို့ ပြောကြတယ်။ ချီတော်လိရဲ့
မိဘတွေကတောင်ရဲ့ ဟိုဖက်ခြမ်းက ရွာတစ်ရွာမှာနေပြီး သူကဒီရွာမှာ
မိဘနဲ့ခွဲပြီး ကျောင်းလာတက်တယ်လို့ သိရတယ်။ ညရောက်တော့လဲ
သူပြန်မလာပါဘူး။ တနင်္လာနေ့ မနက်ရောက်တော့ လူတွေက သူနေတဲ့ ကျောင်းကို
သွားပြီး ဆရာ့ကို အကျိုးအကြောင်း သွားပြောပြတယ်။ ဆရာက " စိတ်မပူပါနဲ့။
ငွေတွေယူပြီး သူ့မိဘအိမ် ပြန်ပြေးသွားတာဖြစ်မယ်။ အန္တရာယ်တစ်ခုခုနဲ့
ရင်ဆိုင်ရတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး" လို့ ပြောတယ်။
၀ယ်ခိုင်းတဲ့ လူတွေက ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ကို ပိုက်ဆံနဲ့
မြူဆွယ်မိလို့ နောင်တရကြတယ်။ အဲဒီည လူတွေ အိပ်မောကျနေတဲ့ သန်းခေါင်ယံ
အချိန်မှာ တံခါးခေါက်သံ တိုးတိုးကို လူတွေ ကြားလိုက်ရတယ်။
တံခါးဖွင့်ကြည့်တော့ ချီတော်လိဟာ အ၀တ်အစား စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်၊
ကိုယ်ပေါ်မှာလဲ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာအချို့နဲ့ ရွံတွေလူးလို့ တံခါးဝမှာ
သူက " +++ မှာ ဘီယာတစ်ပုလင်းပဲ ကျန်လို့ ကျွန်တော်
တောင်(၄)တောင်လောက်ဖြတ်ပြီး တစ်ခြားရွာမှာ သွားဝယ်ခဲ့တယ်။ လမ်းခုလပ်မှာ
မတော်တဆ ချော်လဲလို့ (၃)လုံး ကွဲသွားပါတယ်" ပြောပြီး ကွဲသွားတဲ့
ပုလင်းစတွေနဲ့ လက်ကျန်ငွေကို ကမ်းပေးပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ အမှား
လုပ်ထားမိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို့ ခေါင်းငုံ့ပြီး တနေရာမှာ ရပ်နေခဲ့တယ်။
သူ့ကို ကြည့်ပြီး လူတွေက မျက်ရည်ကျမိကြတယ်။ ကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေထဲမှာ
ချီတော်လိကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာထက် သူ့ကို အထင်လွဲမိတဲ့ အားနာစိတ်နဲ့
ရှက်ရွံစိတ်တွေက ပို ပိုပါလိမ့်မယ်။
တောတောင်တွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖြတ်ပြီး လူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ဆန္ဒကို
ဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့စိတ်ဓာတ်ကို ဘာလို့ သံသယဖြစ်ခဲ့ကြသလဲ......? ဖြူစင်
ရိုးသားတဲ့ သူ့စိတ်ဓာတ်ကို လူတွေက ဘာကြောင့် အထင်လွဲခဲ့ကြသလဲ....?
အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ အလှပဆုံး စိတ်ဓာတ်လို့ ကျွန်တော်
Posted by khukdaungnee.blogspot.com at 10:56 PM0comments
Posted by khukdaungnee.blogspot.com at 8:13 PM0comments
ကျနော်သည် အစည်းအဝေးကိုမကြာခဏ လုပ်လေ့ကျင်းပလေ့ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတခုတွင် (၁၀)လခန့် အလုပ်လုပ်ဖူးသည်၊ ကျနော်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော စာအုပ်တအုပ်ဖတ်ဖူးသည်၊ ၄င်းစာအုပ်တွင်သင်သည် လူတစ်ဦးတယောက်နှင့်ဖြစ်စေ ဆယ်ယောက်နှင့်ဖြစ်စေ အစည်းအဝေးပြုလုပ်လျှက် ရှိနေစဉ် မကြာခဏကြားဖြတ်နှောက်ယှက်မှုများရှိနေပါကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးဦးတည် ချက်ကိုမရောက်တော့ပါ၊နိုင်ငံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအစည်းအဝေးသော်လည်းကောင်း၊စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက် အစည်းအဝေးသော်လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစည်းအဝေးသော်လည်းကောင်း မည်သည့်ကြား
ဖြတ်အနှောင့်အယှက်များမရှိစေရန်ကြိုတင်စီမံထားရပါမည်၊မည်သည့်အရေးကိစ္စမဆို အနည်းဆုံးမိနစ်(၉၀) စောင့်ရပါမည်၊အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်မှာလည်း မည်သည့်အစည်းအဝေးပွဲမဆို မိနစ်(၉၀)ထက်ပိုပြီး မကြာသင့်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လူတစ်ဦးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုဟာမိနစ်(၉၀)ထက်ပိုပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သည်၊အစည်းအဝေးဘာကြောင့်ကျင်းပရန်လိုအပ်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာသိရန်လိုပါသည်၊ငွေကုန် အချိန်ကုန်သံပြာသော အစည်းအဝေးမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရ၊အစည်းအဝေးများ မကြာခဏပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း သည်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကိုဖေါ်ပြရာရောက်သည်၊အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အစည်းအဝေးများသည် သာမန် အလုပ်လုပ်သောအချိန်များကို ထိခိုက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊အကြီးအကဲများ၊ခေါင်းဆောင်များသည်မိမိ အလုပ်လုပ်ချိန်လေးပုံတပုံထက် အစည်းအဝေးတွင်အချိန်ကုန်နေသည်ဆိုလျှင် ထိုအဖွဲ့အစည်းသည် ညံ့ဖျင်း သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြရာရောက်သည်၊ အစည်းအဝေးဆိုသည်မှာ လိုအပ်မှသာ ကျင်းပသင့်သည်၊ အစည်းအဝေးက်ို ပုံမှန်လုပ်ကဲ့သို့ သဘောထားရန်မဟုတ်၊အချို့သောအဖွဲ့အစည်းများသည်၊ နံနက်ရုံးတက်ချိန် မှသည်ညနေမိုးချုပ်သည်အထိ အစည်းအဝေးကျင်းပတတ်သည်ကို ကျနော်တွေ့မြင်နေရပါသည်၊ အဖွဲ့အစည်း တခုတွင် လူအများသည် တချိန်လုံးလိုလို စုရုံးစုရုံးနှင့် တွေ့ဆုံစည်းဝေးနေကြသည်ဆိုလျှင် မည်သူမျှအလုပ်ကို ဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်းသိသာလာပါသည်၊ခေါင်းဆောင်ဆိုသူအနေနှင့်လည်း အစည်းအဝေးများတက်နေရသည်နှင့် အချိန်ကိုကုန်လွန်စေသည့်အဖြစ်မျိုးမဖြစ်သင့်ပေ၊ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးနှင့် အချိန်ကိုမကုန်စေသင့်ပါ၊အစည်းအဝေးများများတက်လျှင် အချိန်ကုန်သည်၊ငွေကုန်သည်၊ ရုံးတွင်ကျန်ရှိနေသောမိမိရဲ့လက်အောင်ငယ်သားများ ရုံးတွင်ကော်ဖီသောက် အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာကာ အပြင်သို့ခဏခဏထွက်ခြင်းသည်၊ရုံးချိန်အတွင်း အလုပ်လုပ်ချိန်ကိုထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်း ခေါင်းဆောင်ဆိုသူ များအားအသိပေးအပ်ပါသည်။
Posted by khukdaungnee.blogspot.com at 6:46 PM0comments